AHDR သည် ပညာရေးဆိုင်ရာ ပရောဂျက်အရာရှိကို ရှာဖွေနေသည် -History Education (Cyprus) - ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု
AHDR သည် ပညာရေးဆိုင်ရာ ပရောဂျက်အရာရှိ -History Education (Cyprus) ကို ရှာဖွေသည်
နိုဝင်ဘာလ 1, 2021 ဂျော့ဘ် 0
အလုပ်ဖွင့်ခြင်း- ပညာရေးဆိုင်ရာ ပရောဂျက်အရာရှိ – သမိုင်းပညာရေး (အချိန်ပြည့်ရာထူး)
အဖွဲ့အစည်းက: သမိုင်းဝင်ဆွေးနွေးမှုနှင့်သုတေသနအသင်း (AHDR)
လျှောက်လွှာနောက်ဆုံးရက်: စိတ်ပါဝင်စားသူများသည် မိမိတို့၏ CV နှင့် သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားမှုပေးစာ 10 နိုဝင်ဘာလ 2021.
The Association for Historical Dialogue and Research (AHDR) သည် 2003 ခုနှစ်တွင် Nicosia တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော အစိုးရမဟုတ်သော အစုအဖွဲ့ပေါင်းစုံ၊ အကျိုးအမြတ်မယူသော၊ အစိုးရမဟုတ်သော သီးခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ AHDR သည် သမိုင်း၊ သမိုင်းကြောင်းနှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာ သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို မျှော်မှန်းထားပြီး၊ သင်ယူခြင်းသည် နားလည်မှုနှင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားတွေးခေါ်မှု တိုးတက်မှုအတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ယူဆပြီး ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးယဉ်ကျေးမှု၏ မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ကြိုဆိုပါသည်။ ဤအဆုံးသတ်တွင် AHDR သည် မတူကွဲပြားမှုနှင့် အတွေးအခေါ်များ၏ ဆွေးနွေးချက်များကို လေးစားမှုအပေါ်အခြေခံ၍ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူမှုရေးနောက်ခံတိုင်းရှိ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများကို ဝင်ခွင့်ပေးသည်။ AHDR သည် စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးကို တရားဝင်နှင့် တရားဝင်မဟုတ်သောနေရာများတွင် မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ၎င်း၏မစ်ရှင်ကို ကျယ်ပြန့်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ကျွန်းပေါ်ရှိ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအားလုံးမှ ကျောင်းနေကလေးငယ်များ၊ ဤအခြေအနေတွင် AHDR သည် ဆိုက်ပရပ်စ်၏ အနာဂတ်မျိုးဆက်များအကြား အဆက်အသွယ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ရာတွင် ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍအတွက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
သမိုင်းပညာရေးဆိုင်ရာ AHDR ၏ အလုပ်နောက်ခံ- AHDR ၏ ရည်မှန်းချက်မှာ သမိုင်းသင်ကြားရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုများနှင့် သုတေသနပြုခြင်းများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် မြှင့်တင်ရန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီကို ခိုင်မာစေရေးဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်၊ ရှုထောင့်ပေါင်းစုံနှင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားတွေးခေါ်မှုတို့သည် AHDR အလုပ်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤမူဘောင်တွင်၊ AHDR ၏သမိုင်းပညာရေးဆိုင်ရာအလုပ်သည် သုတေသနနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအပေါ်အလေးပေးသည်။ စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ AHDR ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည် ပဋိပက္ခနှင့် ပဋိပက္ခလွန်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် သမိုင်းသင်ကြားမှု၏ ရှုပ်ထွေးမှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အဆင်သင့်ဖြစ်လာစေရန် ပညာတတ်များ၊ သမိုင်းပညာရှင်များ၊ ကျောင်းသားများနှင့် သုတေသီများအတွက် အခွင့်အလမ်းများပေးရန် အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ သမိုင်းနှင့် သမိုင်းပညာပေးလုပ်ငန်းများကို အာရုံစိုက်သည်-
ဆိုက်ပရပ်စ်သမိုင်း၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းနှင့် သမိုင်းသင်ကြားနည်းစနစ်တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် နှစ်ထပ်လူထုနှင့် မိုနို-လူထု ဆရာလေ့ကျင့်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊
သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် သုတေသနတွေ့ရှိချက်များကို ဖြန့်ဝေခြင်း၊
သမိုင်းနှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရေးဆိုင်ရာ ပြပွဲများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊
မြို့တွင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် စက်ဘီးခရီးစဉ်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊
သမိုင်းပညာရေးနယ်ပယ်တွင် ပြည်တွင်းပြည်ပ သက်ဆိုင်သူများနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း၊
၎င်း၏လုပ်ငန်းကိုပံ့ပိုးရန်အတွက် AHDR သည် အချိန်ပြည့်ဝန်ဆောင်မှုများ လိုအပ်သည်။ ပညာရေးစီမံကိန်းအရာရှိ နယ်ပယ်တွင် သရုပ်ပြ အတွေ့အကြုံများဖြင့် သမိုင်းပညာရေး အသင်း၏ လက်ရှိနှင့် အနာဂတ် ပညာရေးဆိုင်ရာ ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
လိုအပ်သော အရည်အချင်းများနှင့် အရည်အချင်းများ ပညာရေးစီမံကိန်းအရာရှိအတွက်
သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး3နှစ်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များတွင် မဟာဘွဲ့၊
ဘွဲ့ရရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး5နှစ်ရှိရမည်။
သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်များတွင် သိသိသာသာနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု၊
ဒီဇိုင်း (အဆိုပြုချက်ရေးသားခြင်း) နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာနှင့်/သို့မဟုတ် သုတေသနပရောဂျက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အတွေ့အကြုံ၊
အလွန်ကောင်းမွန်သော သုတေသနနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစွမ်းရည်၊
ပညာရေးအတွက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းနှင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ၊
အဝေးရောက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ၊
ဆိုက်ပရပ်စ်၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေနှင့် ဆက်စပ်စိန်ခေါ်မှုများကို အထူးကောင်းမွန်သော အသိပညာ၊
ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန် တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ ရွေးချယ်မှုများကို မြှင့်တင်ရန် တက်ကြွစွာရှာဖွေနိုင်ခြင်း၊
အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့်အတူ ထူးချွန်သော ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်၊
ပညာရေးဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များအတွက် စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီနိုင်မှု၊
အစီအစဉ်များကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ ဦးစားပေးပြီး အလုပ်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပေးအပ်နိုင်မှုတို့ကို သရုပ်ပြခဲ့သည်။
အထူးကောင်းမွန်သော ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှု၊ အထူးသဖြင့် MS Office ၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော အမိန့်ပေးမှု၊
အင်္ဂလိပ်လို ရေးတတ်၊ ပြောတတ်ဖို့ လိုတယ်။
တူရကီ နှင့်/ သို့မဟုတ် ဂရိ အသိပညာကို အပေါင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပါမည်။
အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် လျှောက်လွှာများကို ရွေးချယ်ခြင်း။
လျှောက်ထားသူများသည် ၎င်းတို့၏ အရည်အချင်းများနှင့် သရုပ်ပြအဆင့်နှင့်အညီ ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။ အကဲဖြတ်ရေးကော်မတီသည် လက်ခံရရှိထားသော စိတ်ဝင်စားမှု/လျှောက်လွှာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး အင်တာဗျူးအတွက် ဖိတ်ကြားမည့် အောင်မြင်သော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ဆန်ခါတင်စာရင်းပြုစုမည်ဖြစ်သည်။ ဆန်ခါတင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသာ ဆက်သွယ်ပါမည်။
စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ CV နှင့် သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို အီးမေးလ်မှတဆင့် စိတ်ဝင်စားသော ပေးစာဖြင့် ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] by 10 နိုဝင်ဘာလ 2021.
Shine Africa Campaign ကို စတင်ခဲ့သည်- Moringa သစ်ပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာပေးခြင်း အသိပညာများ မြှင့်တင်ခြင်း။
ဂရိ Cypriot နှင့်တူရကီ Cypriot ပညာပေးများသည်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်းအကြောင်းပြောဆိုကြသည်
သြဂုတ်လ 1, 2019 လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံစာများ 0
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင်နီကိုစီယာကြားခံဇုန်တွင်ကျင်းပခဲ့သော ၄၃ ကြိမ်မြောက်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးအရဂရိ Cypriot နှင့်တူရကီ Cypriot ပညာရေးနှင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရန်သူတို့၏ကြိုးပမ်းမှုများကိုမျှဝေခဲ့ကြသည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
ဆိုက်ပရပ်စ်အခြေစိုက် NGO အသင်းမှသမိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲနှင့်သုတေသနအသင်းသည် ၂၀၁၆ မက်စ်ဗန် der Stoel ဆုကိုရရှိခဲ့သည်
နိုဝင်ဘာလ 9, 2016 သတင်းနှင့်အထူးများ 0
ဒတ်ခ်ျနိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီး Bert Koenders သည်ဆိုက်ပရပ်စ်အခြေစိုက်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်သမိုင်း ၀ င်ဆွေးနွေးမှုနှင့်သုတေသနအသင်း (Max van der der Stoel Award) ကို ၂၀၁၆ တွင်ပြန်လည်သင်ကြားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသမိုင်းသင်ကြားခြင်းဆိုင်ရာအလုပ်အတွက်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်၌တည်၏။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]